भोलि कार्तिक ७ गते आईतबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल ! – List Khabar
Home / जीवनशैली / भोलि कार्तिक ७ गते आईतबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
भोलि कार्तिक ७ गते आईतबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
admin October 23, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 222 Views
आफ्नो निजी विचारलाई छोडेर अन्य विचारलाई अपनाउनु होला। घर तथा परिवारसँग काम गर्ने समयमा समाधानकारी व्यवहार अपनाउन उचित छ । कसैसँग वाद-विवाद वा मनमुटाव होला ।अधिक खर्च हुन सक्ला ।आर्थिक विषयमा सावधानी अपनाउनुहोला ।
तपाईं आर्थिक जिम्मेवारीहरूप्रति ध्यान दिनुहुन्छ। आर्थिक लाभ हुने सम्भावना छ। मनमा उत्साह र विचारको स्थिरताको कारण सबै कार्य ठीक लाग्छ। मनोरंजन, सौंदर्य-प्रसाधन, आभूषण आदिमा खर्च होला।
तपाईको बोलिले भ्रान्ति खडा नहोस् यस कुराको ध्यान राख्नुहोला । आवेश र उग्रताको कारण कसैसँग झगडा नहोस यस कुराको ध्यान राख्नुहोला । खासगरी आँखामा पीडा होला । ईश्वरको ध्यान र आध्यात्मिकताले मन शान्त होला ।
तपाईको लागि लाभदायक दिन छ। जागिर र ब्यापार ब्यवसायमा लाभ हुने संकेत छ। साथीभाइसँग खुसीसाथ समय बिताउनु हुनेछ । विवाह हुने योग छ। आम्दानीका स्रोत बढ्नेछन् । आकस्मिक धन प्राप्त हुनेछ। आर्थिक योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ ।
कार्यक्षेत्रमा प्रभाव पर्नेछ । उच्च अधिकारी तपाईको कार्यलाई सकारात्मक हुनाले प्रसन्न हुनेछन् । तपाई आआफ्नो कार्य दृढ मनोबल र् आत्मविश्वास पुर्वक गर्नुहुनेछ । पितासँग सम्बन्ध प्रेमपूर्ण रहनेछ । सम्पत्ति सम्बन्धित कार्य गर्नको लागि दिन अनुकुल छ ।
तपाईको दिन प्रतिकुलतामय रहनेछ । मन चिन्ताले व्यग्र रहनेछ । पेसा वा व्यवसायिक स्थलमा सहकर्मचारीको र उच्च अधिकारीको व्यवहार नकारात्मक रहनेछ । सन्तानकोस्वास्थ्यको विषयमा चिन्ता रहनेछ ।
कसैसँग वादविवाद वा झगडा नगर्नुहोला। बोली र व्यवहारमा ध्यान दिनुहोला । स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला। आकस्मिक आर्थिक लाभ हुने सम्भावना छ । आध्यात्मिक चिन्ताको माध्यम बाट मानसिक शान्ति प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
तपाईको लागि मनोरञ्जनको दिन छ। साथीहरूसँग पार्टी वा पिकनिकमा दिन धेरै राम्रोसँग बित्नेछ। लत्ताकपडा, सवारी साधन र भोजनको राम्रो आनन्द प्राप्त हुनेछ। तपाईको इज्जत बढ्नेछ।
दिन तपाईको लागि अनुकूल छ। घरको वातावरण रमाइलो रहनेछ। तपाई शारीरिक रूपले स्वस्थ रहनुहुनेछ। व्यवसायिक स्थलमा वातावरण अनुकूल रहनेछ। अपेक्षित सहयोग मिल्नेछ। घर बाट शुभ समाचार आउनेछ।
तपाईले आलस्य, थकान, कमजोरीका कारण शारीरिक रूपमा अस्वस्थ महसुस गर्नुहुनेछ। मानसिक रुपमा चिन्तित रहनु हुनेछ। उच्च अधिकारी तपाईको कामबाट सन्तुष्ट हुने छैनन्। मनमा दुविधाको कारण निर्णय गर्नमा बाधा आउनेछ ।
तपाईको स्वभावमा जिद्दीपन रहनेछ । अधिक भावुकताको कारण मन अस्वस्थ रहनेछ । सामाजिक रुपमा सम्मान भंग नहोस यस कुराको ध्यान राख्नुहोला । घर र सम्पत्तिसंग सम्बन्धित कार्यलाई सम्हालेर चल्नुहोला । विद्याप्राप्तिको लागि अनुकुल दिन छ ।
आवश्यक निर्णय लिनको लागि शुभ दिन छ । सिर्जनात्मक शक्ति वृद्दि हुनेछ । विचारमा स्थिरता तथा मनमा दृढता हुनाले कार्य राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ । सामाजिक रुपले मान-प्रतिष्ठा वृद्दि होला ।
Previous यी शंकालु डाक्टरले आफनै श्रीमतिको नीजि भाग सिलाईदिएपछि…..
Next हेर्नुहोस् बैकले कसरी लुट्छ : लुटेरा बैक चिन्नुहोस् नत्र तपाईको सम्पत्ति सर्वस्व बनाउनेछ !